Anarana: Mobutu Sese Seko
Teraka: 14 Oktobra 1930
Maty: 7 Septambra 1997
Firenena: Repoblika Demokratikan'i Kongo
Asa : * mpanao politika
Mobutu Sese Seko dia mpanao pôlitika sy maresaly sady filohan' i Zaira teo anelanelan' ny taona 1965 sy 1997, Repoblika Demôkratikan' i Kôngô ankehitriny, teraka tao Lisala tamin' ny 14 Oktobra 1930 ary maty tamin' ny 7 Septambra 1997 tao Rabat. Joseph Désiré Mobutu no tena anarany, nefa nomena ny anarana hoe Sese Seko Kuku Ngbendu Waza Banga izay midika hoe "mpiantafika mandresy hatrany tsy azo sakanana" izy.
1 Fiainany talohan' ny haha filoham-pirenena azy
1.1 Tao amin' ny tafiky ny mpanjanatany
1.2 Tao amin' ny governemantan' i Lumumba
2.1 Nanao fanamparam-pahefana
2.2 Notoherin' ny olona
2.3 Savorovoro sy fikomiana
Fiainany talohan' ny haha filoham-pirenena azyHanova
Tao amin' ny tafiky ny mpanjanatanyHanova
Manamboninahitra tsotra tao amin' ny tafiky ny mpanjanatany belza i Mobutu teo anelanelan' ny taona 1948 sy 1956. Taorian' izany dia lasa mpanao gazety izy.
Tao amin' ny governemantan' i LumumbaHanova
Nikambana tao amin' ny Mouvement National Congolais (MNC) izay naorin' i Patrice Lumumba i Mobutu tamin' ny taona 1958. Nandray anjara tamin' ny "latabatra boribory" natao tao Bruxelles tamin' ny volana Janoary 1960 izay niteraka ny fahaleovan-tenan' i Kôngô izy. Sekreteram-panjakana tao amin' ny governemantan' i Lumumba (izay piraiminisitra) izy ary notendrena ho lehiben' ny etamazôro tamin' ny volana Jolay 1960 rehefa avy nasondro-boninahitra ho kôlônely.
Nandritra ny tsy filaminana tao Kôngô taorian' ny fanambaràna ny fahaleovan-tena dia nandrava vonjimaika ny governemanta sivily i Mobutu izay notohanan' ny tafika. Tamin' ny volana Desambra 1960 dia nampanamboriny i Lumumba, avy eo novonoina tamin' ny 18 Janoary 1961 araka ny baikony, rehefa avy nafindra fonja tany Katanga. Tamin' io volana Janoary io ihany dia naverina tamin' ny toerany ny governemanta ary nifantoka tamin' ny fandaminana indray ny tafika i Mobutu. Nanararaotra ny fahelemena ara-pôlitikan' ny filoha Joseph Kasavubu (filoha voalohany tao Kôngô) i Mobutu ka nanao fanonganam-panjakana ara-tafika indray tamin' ny 24 Novambra 1965 sady nanambara ny tenany ho filohan' ny Repoblika.
Nanangana ny Mouvement Populaire pour la Révolution (MPR) i Mobutu ka lasa antoko tokana io antoko io tao Kôngô. Nampandany lalàm-panorenana vaovao tamin' ny alalan' ny fitsapan-kevi-bahoaka i Mobutu tamin' ny volana Jona 1967. Lalàm-panorenana nanome fahefana lehibe ny filoham-pirenena izany. Tamin' ny alalan' ny mpiambina manokana ny filoham-pirenena dia nitondra ny firenena tamin' ny fanamparam-pahefana i Mobutu. Tamin' ny taona 1971 dia nanao fampielezan-kevitra momba ny famerenana ny firena ho amin' ny maha afrikana azy i Mobutu ka naverina amin' ny maha afrikana azy ny anaran' olona, ny anaram-paritra, ny anaran-drenirano ary ny anaran-tanàna maro. Novana ho Zaira ny anaran' i Kôngô. Nitontongana izaitsizy anefa ny toekaren' i Zaira vokatry ny kolikoly sy ny tsy fahaiza-mitantana. Tamin' ny taona 1977 sy 1978 dia nanampy an' i Mobutu ny firenena tandrefana tamin' ireo ady tao Shaba (anarana vaovaon' i Katanga). Tamin' ny taona 1982 dia nisondro-boninahitra ho maresaly i Mobutu.
Notoherin' ny olonaHanova
Hatramin' ny fiantombohan' ireo taona 1990 dia nihanantanjaka ny fanoherana ara-pôlitika izay nalemy noho ny fizarazaràna teo aloha. Nanery an' i Mobutu ny firenena tandrefana tamin' ny alalan' ny fisakananana ny famoahany ny vola napetrany tany ivelany, mba hamelany ny fitsanganan' ny antoko maro. Nanambara ny fialany amin' ny pôlitikan' ny antoko tokana i Mobutu tamin' ny volana Avrily 1990. Tamin' ny taona 1991 dia tafatsangana ara-panjakana ny atoko pôlitika miisa enimpolo ary nisy ny fanaovana fivoriam-bem-pirenena nananganana ny andrim-panjakana vaovao hitondrana an' i Zaira. Nanomboka tamin' ny volana Jona 1994 dia natsangana ny fitondrana tetezamita izay nitsinjarana ny fahefana teo amin' ny filoham-pirenena sy ny Filan-kevitra Ambonin' ny Repoblika (frantsay: Haut Conseil de la République).
Savorovoro sy fikomianaHanova
Nanomboka tamin' ny volana Jona 1995 dia niseho matetika mandritra ny fampidirana ny demôkrasia ny savorovoro izay nofaizin' ny fitondrana mafy. Mpianatra maherin' ny 500 no novonoin' ny mpiambina manokana ny filoham-pirenena tamin' ny taona 1995. Nisy koa ny fikomian' ny miaramila sasany. Tamin' ny taona 1993 dia anarivony maro ireo vahiny izay niala avy tao Kinshasa taorian' ny fikomian' ny tafika sy ny fandoroana trano maro izay nahafatesan' i Philippe Bernard masoivohon' i Frantsa. Tapaka ny fifandraisana ara-diplômasia tamin' ny nanesorana ny piraiminisitra Tshisekedi. Tsy tafaverina izany fifandraisanana izany raha tsy tamin' ny taona 1995 ka nahatonga an' i Mobutu hahazo manatrika ny fivoriam-be iraisam-pirenena amin' izay. Tsy nisy fihatsarany anefa ny fandriam-pahalemana tao Zaira hatramin' izay ka hatramin' ny taona 1997 izay nanonganan' i Laurent-Désiré Kabila an' i Mobutu.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobutu_Sese_Seko&oldid=1043265"
Dernière modification le 25 Janoary 2022, à 08:52
Voaova farany tamin'ny 25 Janoary 2022 amin'ny 08:52 ity pejy ity.